Somaliland: Marxaladda laga soo faraxashay iyo tallaabada xigta | Berberanews.com
Home WARARKA Somaliland: Marxaladda laga soo faraxashay iyo tallaabada xigta
Somaliland: Marxaladda laga soo faraxashay iyo tallaabada xigta
Saacaddu markii ay noqotay lixdii maqribnimo ee caawa (31 May 2021), waxa ay reer Somaliland midnino iyo isku duubni kaga soo gudbeen dhawr marxaladood oo muhiim ah, kuwaas oo kala ah; Diwaangelinta codbixiyeyaaasha, qaybintii kaadhadhka codbixinta, kala-xulistii murrashaxiinta, ololihii xisbiyada iyo ugu dambayntii doorashadii loo dareeray ee ay muwaadiniintu codkooda ku dhiibteen, waxayna dhammaanba marxaladahaasi noqdeen qaar ku soo dhammaaday guul iyo nabadgelyo, taasoo soo jiidatay indhaha caalamka.
Guulaha laga gaadhay marxaladahaas laga soo gudbay waxa saldhig u ahaa iskaashi buuxa oo ay yeesheen Xukuumadda iyo saddexda xisbi qaran, murrashaxiinta oo iyaguna si nadiif ah u ololeeyey iyo shacbiga oo muujiyey waddaniyad iyo ilbaxnimo dheeraad ah.
Tallaabooyinka xiga ee caawa bilaabmaya waxa ka mid ah tirinta waraaqaha codbixinta iyo ku dhawaaqista natiijada doorashada, iyadoo ay caddahay in saddex meelood laba meelood dhacayaan, halka ay guushu raaci doonto hal meelood oo qudha.
Haddaba, maxaa inala gudboon? Waxa ay hawshu si gaar ah u saaran tahay saddexda xisbi qaran iyo murrashaxiintooda oo looga baahan yahay inay si qurux badan oo bisayl siyaasadeed ah u aqbalaan natiijada la soo saaro, taasina waa shaambadda ugu dambaysa ee lagu dhufanayo quruxda doorashada, koboca hannaanka dimuqraadiyadeed ee Jamhuuriyadda Somaliland.
Haddii ay soo baxaan cabashooyin macquul ah iyo waxyaabo ay saluugaan murrashaxiintu waa in xalkeeda loo maro dariiqyada sharciga ah ee lagu caddeeyey xeerka guud ee doorashooyinka, weliba guusha ugu muhiimsan waxa xambaarayana xisbiga iyo murrashaxiinta si waddaniyad leh ugu hor aqbala natiijada, una haneeya walaalahooda kale ee guulaystay.
SOMALILAND guul iyo gobonimo ayey muujisay ee ha laga digtoonaado wixii inaga gaagixin kara gobonimada shacbigu hormuudka u yihiin.
WQ Maxamed Cirro
Previous articleToos u daawo dhacdooyinka Doorashada Somaliland 2021
Next articleBerbera iyo qaabkii codbixinta doorashooyinka